‘ठेकीमा दहि’ लाई १० लाख !! – Nepal Fashion Week
December 28, 2017 NEPALFASHIONWEEKBreaking NewsNo Comment on ‘ठेकीमा दहि’ लाई १० लाख !!
काठमाडौँ. गत डिसेम्बर १ मा युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको ‘ठेकीमा दहि’ बोलको गीतलाई दर्शकले रुचाएका छन् । फिल्म ‘हुर्रे’ मा समावेश यस गीतलाई युट्युबमा १० लाख भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । कमेडी शैलीको डान्सीङ नम्बर भएकै कारण गीतलाई रुचाइएको निर्माण पक्षको भनाइ छ । गीतमा फिल्मका तीन मुख्य पात्र केकी अधिकारी , राजाराम पौडेल र अंकित खड्का फिचरीङ छन् । गीतमा केकीले राजाराम र अंकितसंग कम्मर मर्कायेकी छिन । बौद्धमा रहेको स्तुपा वरपर खिचिएको गीतलाई बिक्रम स्वारले निर्देशन गरेका हुन् ।
मिसेज बिउटिफुल पौष २३ गते राष्ट्रिय नाचघरमा फाइनल हुने